Weftigii uu hoggaaminayay Guddoomiye-xigeenka Baarlamaanka Kenya oo booqday Magaalada Borama | Somaliland.Org
December 26, 2009	Borama (Somaliland.Org)- Weftigii uu hoggaaminayay Guddoomiye-ku-xigeenka Baarlamaanka Kenya, ayaa maanta booqasho ku tegay Magaalada Borama ee Xarunta Gobolka Awdal, iyaga oo isla galabtaba dib ugu soo laabtay Hargeysa.
Weftiga oo ay socdaalkooda Borama ku wehelinayeen Wasiiro iyo Masuuliyiin Xukuumadda ka tirsan oo Hargeysa ka raacay, ayaa waxa Borama ku soo dhaweeyay Maamulka Gobolka Awdal iyo Maamulka iyo Ardayda Jaamacada Cammuud.
Weftigu intii ay ku sugnaayeen Borama waxay booqasho ku tageen Jaamacadda Cammuud oo ay kormeer ku soo mareen qaybaheeda kala duwan, halkaas oo ay kula kulmeen Guddoomiyaha JaamacadDaas Prof. Saleebaan Axmed Guulleed, isla markaana uga waramay xaaladda Waxbarasho ee Jaamacada, waxaanu sheegay in tirade ardayda wax ka barata Jaamacaddu ay tiradoodu gaadhayso ilaa 2000 oo arday. Waxa kale oo uu Guddoomiyaha Jaamacadda Cammuud sheegay in xidhiidh wanaagsani uu ka dhaxeeyo Cammuud iyo Jaamacadaha Kenya.
Waxaanu Guddoomiye Ku Xigeenka baarlamaanka Kenya Md. Faarax Macalin ardayda jaamacada hadal kooban oo uu u jeediyay ku sheegay inay ku dedaalaan ka midho dhalinta aqoonta ay bartaan.
Sidoo kale, weftigaasi intii ay joogeen Boorama waxay booqdeen oo kale cusbatalka cusub ee Al-xayaad oo ah xarun loogu tallo galay in ay wax ku bartaan ardayda wax ka barta kulliyada caafimaadka ee jaamacada Cammuud. Waxaana Weftigan qado-sharaf loogu sameeyay Huteelka Rays ee Magaaladaas, iyaga oo isla galabta dib ugu soo laabtay Hargeysa.